Safarka Islaamka ee Sacuudi Carabiya - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Safarka Islaamka ee Sacuudiga
Xaaladda Covid-19 ee Sacuudi Carabiya
“Boqortooyadeyda Sacuudiga waxay sii noolaan doontaa oo keliya maadaama ay weli tahay dal ay adag tahay in la soo galo, halkaasoo ajnabi uusan ujeedo kale lahayn, iyadoo la fulinayo howshiisa, laakiin inuu baxo.” - King Abdul Aziz bin Saud, ca. 1930
Saudi Arabia waa boqortooyo juquraafi ahaan gacanta ku haysa jasiiradda Carabta, lehna xeebo ku teedsan Gacanka Beershiya iyo Badda Cas. Waxay xuduud la leedahay Jordan, Iraq, Kuwait, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Cumaan iyo Yemen.
Sacuudi Carabiya waxaa ku jira magaalooyinka Islaamka ugu barakaysan - Mecca (Makkah) iyo Madiina (Madiina) - oo ah halka ay ku soo qulqulayaan xujaajta muslimiinta ah inta lagu guda jiro Xajka Virus-ka July 29, 2020. Xajka, oo ay weheliyaan xoogaa dalagyo ah oo si fiican ugu koray oases, sida timirta medjool, ayaa ahaan jirtay isha ugu weyn ee dalka laga helo dakhliga kahor intaan la helin saliida wax kayar 100 sano kahor.
Boqortooyadu waxay si xoog leh u dhaqan gelisaa fasiraad aad u adag oo sharciga Islaamka ah, in kasta oo nasiino yar la qaatay dhowrkii sano ee la soo dhaafay, tan ugu badanina ay tahay gunnada haweenka ee gawaarida.
Sacuudi Carabiya waxay maamul ahaan u qaybsan tahay 13 gobol (mintaqah), laakiin kala qaybsanaanta soojireenka ah ee dalka ayaa ka waxtar badan macnaheeda.
Riyadh - caasimada iyo "xarunta dhimatay" ee Boqortooyada
Abha - waa magaalo dalxiis xagaaga dalxiis u dalxiis taga oo ku taal koonfur-galbeed meel u dhow xadka Yemen
Dhahran - waa guriga Saudi Aramco, shirkadda batroolka adduunka ugu weyn
Jeddah (Jiddah) - magaalo weyn oo weyn oo ku taal Badda Cas, iyo marinka loo maro Maka iyo Madiina
Jubail - waa magaalada ugu warshadaha badan boqortooyada
Maka (Makkah) - magaalada Islaamka ugu barakaysan
Madiina (Madiinah) - goobta uu ku yaallo Masjidka Nabiga
Najran - waa magaalo ay saameeyeen Yaman oo leh qalcad cajiib ah
Ta'if - waa magaalo buuraley ah oo dhexdhexaad ah iyo aag dalxiis oo caan ah
Filo kala duwanaansho weyn oo ku saabsan higgaadinta Ingiriisiga ee magacyada boosaska jadwalka iyo xitaa calaamadaha waddooyinka: Al Wajh iyo Wedjh waa isku meel. Gaar ahaan, Q / G, E / I, iyo E / A si xor ah ayey isu beddelaan (Qassim / Gassim, Mecca/ Maka, Jeddah/ Jiddah), H / A mararka qaarkood meelaha isku dhaafsadaan (Al-Axsa/Al-Xasa) iyo qodobka qeexan ku socota waa laga tagi karaa ama waa laga bixi karaa (Madiina / Almadinah, Riyadh/ Arriyadh).
Quar madhan (Rub 'al Khali) - mid ka mid ah lamadegaanka ciidda ugu weyn
Xajka Virtual July 29, 2020 - Xajka muslimiinta ee Maka
Madain Saleh - Magaalada Nabataean ee burbursan oo lamid ah Petra
Fagaaraha Dira, Riyadh
Taariikhda Sacuudi Carabiya
Sacuudi Carabiya waxay ka mid tahay seddex dal oo loogu magac daray qoysaskooda reer boqor, oo ay weheliso Maamulaha Liechtenstein iyo Boqortooyada Hashemite ee Jordan. Qoysku waxay ahaayeen sheekhyo ka tirsan Nejd, agagaarka Riyadh, laakiin waxaa ka eryay boqortooyo deris la ah, iyagoo la dhuumanayay eheladooda, amiirrada Kuwait. Kadib 1902dii, Cabdil-Casiis Ibnu Sucuud oo da 'yar iyo dhawr iyo toban gabdhood ayaa u baxay si ay u weeraraan dalkooda. Sidii ay noqotay, soo duulayayaashu si xun ayay wax u xukumayeen, sidaa darteed dad badan oo deegaanka ah ayaa ku soo biiray iyaga. Iyagu kaliya ma aysan qabsan Riyadh, laakiin inta badan dhulka ku hareeraysan.
Intaas ka dib, Cabdul Casiis wuxuu bilaabay olole 30 sano ah oo lagu mideynayo Jasiiradda Carabta. Aaggii uu ku midoobay isaga ayaa loo yaqaanay Sacuudi Carabiya.
1930-yadii, daah-furkii saliidda wuxuu is-beddelay waddanka. Kadib duulaankii Ciraaq ee Kuweyt 1990, Sacuudi Carabiya waxay aqbashay qoyska boqortooyada Kuwait iyo 400,000 oo qaxooti ah halka u ogolaatay ciidamada reer galbeedka iyo kuwa carabta inay ciidooda dhigtaan xoreynta Kuwait sanadka soo socda. Dad kordhaya, shaqo la'aan, xaalufka biyo-mareenka, iyo dhaqaalaha inta badan ku tiirsan wax soo saarka batroolka iyo sicirka ayaa ah welwelka ugu weyn ee dowladda.
Sacuudi Carabiya waa dhaqaale ku saleysan saliida oo leh awood adag oo dowladeed oo ku aaddan howlaha waaweyn ee dhaqaalaha. Sacuudi Carabiya waxay leedahay kaydka batroolka ugu badan aduunka (26% kaydka la xaqiijiyay), waxay kujirtaa dalka ugu dhoofinta badan batroolka, waxayna door hogaamineed ka cayaaraysaa OPEC. Qeybta batroolka waxay xisaabisaa qiyaastii 75% dakhliyada miisaaniyada, 45% GDP, iyo 90% dakhliga dhoofinta. Qiyaastii 25% ee GDP wuxuu ka yimaadaa ganacsiga gaarka loo leeyahay.
Qiyaastii 4 milyan oo shaqaale ajnabi ah ayaa door muhiim ah ka ciyaara dhaqaalaha Sucuudiga - tusaale ahaan, qaybaha saliidda iyo adeegga.
Sannadkii 1999-kii ayay dowladdu ku dhawaaqday qorshayaal ay ku bilaabayso shirkadaha gaarka loo leeyahay ee korontada, taas oo daba socota shirkad gaar loo leeyahay oo isgaarsiinta si gaar ah loogu wareejiyay. Dowladda ayaa la filayaa inay sii wado wicitaanka kobaca ganacsiga gaarka loo leeyahay si loo yareeyo ku tiirsanaanta boqortooyada ee saliidda isla markaana loo kordhiyo fursadaha shaqo ee dadka sii kordhaya ee Sucuudiga. Biyo yaraanta iyo koritaanka degdegga ah ee dadweynaha ayaa xannibaya dadaallada dowladda si loo kordhiyo isku filnaanshaha wax soo saarka beeraha.
Shaqo la’aanta haysata dhalinyarada Sacuudiga ayaa ah dhibaato aad u daran. In kasta oo ay qayb ka tahay diidmada Sucuudigu in ay qaadato noocyo badan oo shaqo ah, haddana sidoo kale waa run in muwaadiniinta Sucuudiga lagu qasbo in ay la tartamaan shaqaale aad u tiro badan oo la soo dhoofiyo, taas oo inta badan aad uga jaban tan kuwa maxalliga ah. Taasi waxay tiri, hantida saliida ee Sacuudi Carabiya waxay u ogolaatay inay siiso muwaadiniinteeda mid ka mid ah dowladaha ugu caansan adduunka ee samafalka inkasta oo aan laga qaadin wax canshuur dakhli ah.
Sacuudi Carabiya waxay ku dhowdahay qiyaastii afar meelood shan meelood oo ka mid ah aagga Jasiiradda Carabta, oo lagu tilmaami karo inay tahay dhul-taag afar-gees leh oo si tartiib-tartiib ah ugu janjeeraya dhanka bari illaa laga gaarayo heerka badda ee Gacanka Beershiya.
Astaamaha ugu muhiimsan ee dhismaha dhulku waa sida soo socota:
Baaxadda buurta Sarawat ama Sarat waxay barbar socotaa xeebta Badda Cas oo ka bilaabmaysa meel u dhow soohdinta Urdun illaa xeebta koonfureed ee Yemen, oo si tartiib tartiib ah kor ugu sii kacaysa xagga koonfureed. Waxay inta badan ka kooban tahay dhagaxa foolkaanaha, gaar ahaan koonfurta, iyo dhagaxa ciida ee woqooyiga, laakiin sidoo kale waxay ku dhexjirtaa beero qadiimi ah iyo dooxooyin wax soo saar leh. Marka mid loo sii dhaqaaqo dhinaca koonfureed ee loo aado Yemen, muuqaalka dhulku wuxuu si tartiib tartiib ah ugu banbaxayaa buuro cagaaran iyo xitaa geedo geedo leh, natiijadu waxay tahay in lagu jiro aagagga ugu sarreeya. Sacuudi Carabiya, inta u dhaxeysa waxaa badanaa loo yaqaan 'Hejaz', in kasta oo qaybta koonfureed ee ugu sareysa loo yaqaan 'Aseer'. Jihooyinka Hejaz waxaa ku yaal magaalada barakaysan ee Makka, oo qiyaastii 400 km woqooyi ka xigta Makka oo ku taal aag u dhexeeya laba beerood oo waaweyn oo waaweyn ayaa ku yaal magaalada kale ee barakaysan ee Madinah.
Galbeedka buuraha Sarawat ama Hejaz waa dhul xeebeed cidhiidhi ah oo loo yaqaan Tihama, halkaas oo ay ku taal magaalada labaad ee ugu weyn dalka, Jidda.
Bariga xeebta Hejaz waxaa ku yaal dhul taag badan oo loo yaqaan Najd, oo ah dhul aad u tiro yar oo ku yaal dhul lama degaan ah oo ay ku xardhan yihiin buuro yaryar oo fulkaano ah. Dhanka bari ee Najd-saxan waxaa ku yaalo isuduwaha Tuwaig, oo ah garoon ciriiri ah oo soconaya 800 km waqooyiga ilaa koonfur. Lakabka ugu sarreeya wuxuu ka samaysan yahay nuuradda iyo lakabka hoose ee dhagaxa ciida. Taariikh ahaan hodanka ku ah biyaha macaan ee dhulka hoostiisa mara ayna ku dhereran yihiin webiyo jiq ah oo aad u tiro badan (wadis), kala duwanaanta Tuwaig iyo agagaarkeeda dhow waxaa ku xardhan koox koox leh magaalooyin iyo tuulooyin. Dhexda, oo u dhexeysa koox wadis ah, waa magaalada caasimada ah, Ar-Riyadh.
Dhanka bariga ka xiga Tuwaig plataeu oo la siman waa marin cidhiidhi ah (20-100 km) oo ah marinno ciid ah oo gaduudan oo loo yaqaan 'lamadegaanka Dahana', oo kala qaybiya "Gobollada Dhexe" ama "Najd" oo ka tirsan Gobolka Bari. Joogitaanka culus ee oksaydhka birtu waxay siinaysaa ciidda muuqaal cas oo u gaar ah. Saxaraha Dahana wuxuu isku xiraa laba "baddood" oo waaweyn oo ciid ah. Kan woqooyi waxaa loo yaqaan Nufuud, qiyaastiina wuxuu leegyahay Lake Superior, koofurta waxaa loo yaqaan "Quarter Bannaan," maxaa loogu yeeraa maxaa yeelay wuxuu daboolayaa rubuc ka mid ah aagga Jasiiradda. In kasta oo asal ahaan aan la noolaan karin, cidhifyadooda seddexdan "badood ee ciidda ah" waxay ka dhigayaan daaq wanaagsan xilliyada guga, laakiin xitaa bedouinku weligiis iskuma deyin inuu ka gudbo Quar bannaan.
Woqooyiga lamadegaanka Nufud waxay ku taal meel cidla ah oo loo yaqaan 'vaste desert steppe', oo dhaqan ahaan u badan dadka reer guuraaga ah ee reer guuraaga ah marka laga reebo in yar oo aag ah sida Al-Jof. Gobolkani waa fidinta lamadegaanka Ciraaq iyo Suuriya (ama taa lidkeed). Xilli roobaadka ka dib, kuwan dooxooyinka ah ee dhagaxa weyn leh waxay dhali karaan seero cagaaran iyo daaqsin aad u tiro badan.
Gobolka bari badiyaa waa madhalays marka laga reebo inuu ka kooban yahay laba xabbo oase oo ka dhashay ilo biyo qadiimi ah. Kuwani waa biyihii al-Qateef ee ku yaal xeebta Gacanka iyo Al-Hasa (ama Al-Ahsa) ee ku sii fida dhulka. Dhinaca Qatif waxaa ku teedsan aag magaalo weyn oo casri ah oo kala ah Dammam, Dhahran iyo Al-Khobar.
Kacbada ku jirta Mecca
Dadku waxay u muuqdaan inay ka fikiraan Sacuudi Carabiya sidii meel bannaan lamadegaanka oo kulul lagu calaamadeeyay ceelasha saliidda, inta badanna dalka intiisa badan, way saxan yihiin. Laga bilaabo Maajo ilaa Sebtembar, waddanka (asal ahaan wax kasta marka laga reebo buuraha koonfur-galbeed) wuxuu ku dubtaa heerkulka celcelis ahaan 42 ° C oo si joogto ah uga sarreeya 50 ° C hooska. Bilaha Luulyo iyo Ogos, gaar ahaan, dhammaan dadka ka carari kara waddanka ee shaqaysan kara ayaa gaagaaban. Xeebaha waxyar baa hagaya badda, taas oo inta badan ka dhigta heerkulka 38 ° C, laakiin qiimaha huurka xad dhaafka ah (85-100%), oo dad badani u arkaan xitaa inay ka dhib badan yihiin kuleylka qalalan ee gudaha, gaar ahaan habeenkii . Kaliya gobollada buuraleyda ah ee sare ayaa qabow (er) leh, iyadoo magaalada xagaaga loo tamashleeyo ee Ta'if ay dhif tahay inay sare u kacdo 35 ° C iyo gobolka buuraha ah ee Asir oo qabow weli.
Xilliga jiilaalka, walow, si la yaab leh ay uga duwan tahay. Maalintii sare Riyadh celcelis ahaan Diisambar kaliya 21 ° C, heerkulkuna si sahal ah ayuu uga hoos mari karaa eber habeenkii, mararka qaarkood xitaa wuxuu keenaa in lagu rusheeyo barafka buuraha koonfureed. Jiilaalku sidoo kale wuxuu roob u keeni karaa dalka oo dhan ama intiisa badan, in kasta oo sanado badan tani ay ku egtahay hal ama laba duufaanno xoog leh. Dhamaadka guga (Abriil iyo May) sidoo kale waa xilli roobaad dalka intiisa badan. Koonfurta, inkasta, qaabkani waa rogay, iyadoo inta badan roobku da'o inta lagu jiro xilliga monsoon ee Badweynta Hindiya inta u dhexeysa May iyo Oktoobar.
Islaamku waa diinta dawladda Sucuudiga. In kasta oo aanu jirin sharci si gaar ah u faraya muwaadiniinta Sucuudiga inay muslim noqdaan, haddana waa mamnuuc in lagu dhaqmo dadyowga iyo ku-beddelashada diimaha aan Islaamka ahayn, waana sharci-darro in lagu soo bandhigo qoraallo aan ka ahayn Quraanka Kariimka meel fagaare ah.
Wax walba oo ka jira Sacuudi Carabiya waxaa nidaamiya shanta salaadood. Dhammaan dukaamada iyo xafiisyada ayaa la xidhaa inta lagu jiro salaad kasta ugu yaraan muddo 20-30 daqiiqo ah, booliska diintuna waxay gaaf wareegayaan jidadka qaarkood waxayna masaafuriyaan masaajidka. Si kastaba ha noqotee, suuqyada wax laga iibsado, isbitaalada iyo garoomada diyaaraduhu way furanyihiin (laakiin dhammaan dukaamada kuyaala gudaha xarumaha ganacsiga ayaa xiran) iyo tagaasida iyo gaadiidka kale ee dadweynaha ayaa si caadi ah usocda.
Salaada koowaad waa fajr, subaxa hore subaxa hore intaan la helin iftiinka koowaad ee iftiinka waaberiga, iyo baaqa salaadda fajr waxay kuu noqon doontaa wicitaankaaga toosinta ee Boqortooyada. Kadib fajr, dadka qaar quraac ayey cunaan oo shaqada ayey aadaan, dukaamada ayaa furan.
Salaada labaad waa dhuhr, ayaa la qabtay wixii ka dambeeya duhurkii runta ee bartamaha maalinta. Salaada duhur ee jimcaha (jimce) waa kan ugu muhiimsan usbuuca, marka xitaa dadka yar ee fiirsashada yar ay badanaa sameeyaan dadaal ay ku tagayaan masaajidka. Kadib dhuhr, dadku waxay aadayaan qado, halka dukaamo badan ay doorteen inay xirnaadaan oo ay kuleexiyaan kuleylka maalinta.
Casar salaaduhu waa galabtii dambe (hal iyo badh ilaa laba saacadood intaan qoraxdu dhicin), iyadoo dukaamo badan dib loo furi doono intaas kadib. Magriib salaadaha waxaa la qabtaa qorrax dhaca waxayna xustaa dhamaadka maalinta shaqada qaybo badan oo gaar loo leeyahay. Salaada ugu dambeysa waa isha'a, oo la qabtay qiyaastii 45min-1h qorrax-dhaca kadib, intaas ka dib dadka deegaanka ayaa casho u aadaya. Dadka ajaanibta ah waxay tixraacayaan waqtiga u dhexeeya maghrib iyo isha'a sida "daaqadda salaadda", inta lagu jiro oo aad garaaci karto dukaamada waaweyn oo aad iibsan karto raashinkaaga haddii aad waqtiga saxda ah hesho.
Waqtiyada salaada ayaa isbadala maalin kasta iyadoo la fiirinayo xilliyada iyo meesha saxda ah ee aad ka joogto Boqortooyada. Wakhtiyada maalinta waxaad ka heli kartaa wargeys kasta.
Sida Bariga Dhexe badankood, isbuucii Sacuudi Carabiya waa Jimce iyo Sabti, Axaduna waa maalin shaqo oo caadi ah. (Ilaa 2013, waxay ahayd Khamiista & Jimcaha.)
Fasiraadda Sucuudiga ee Islaamka waxay u egtahay inay u aragto ciidaha aan Muslimka ahayn cibaado, waxaana la mamnuucay xafladaha ciidaha Kirismaska, Sannadaha Cusub, Maalinta Jacaylka, IWM. Fasaxyada dadweynaha waxaa loo oggol yahay oo keliya Ciid Ciid-Fitr, ciida dhamaadka soonka bisha Ramadaan, Eid al-Adha, oo lagu xusayo rabitaankii Ibraahim ee inuu huro wiilkiisa, ilaa 70 maalmood kadib Ramadaan.
Waxa kale oo jira hal fasax oo cilmaani ah: Mideynta Maalinta Boqortooyada, markay ahayd 23 Sebtember. In kasta oo aysan ahayn maalin rasmi ah ama ciid, waxaa loola dhaqmaa sidii mid. Xaqiiqdii, dhalinyaro badan oo maxalliga ah ayaa u dabaaldegta si ka xamaasad badan Ciidaha Islaamka.
Inta lagu jiro bisha Ramadaan, dadka soo booqda waxaa looga baahan yahay inay u hoggaansamaan xaddidaadaha bisha soonka, ugu yaraan dadweynaha: cunid, cabid ama sigaar cabid inta lagu jiro saacadaha maalinta. Qaar ka mid ah hudheelada wanaagsan waxay awood u yeelan doonaan inay si aamusnaan ah u bixiyaan adeegga qolka inta lagu jiro maalinta, laakiin haddii kale waa inaad sameysaa diyaargarowgaaga. Dhammaan maqaayadaha ku yaal Boqortooyada ayaa xiran inta lagu jiro maalinta, in kasta oo xafiisyada qaar ay furan yihiin saacado kooban, xawaaraha ganacsigu wuu ku sii yaraanayaa torpor. Salaadii maqrib kadib, in kastoo, makhaayadaha bakhaarka ku yaal oo dhan ay furan yihiin oo ay samaynayaan ganacsi guuxaaya illaa saacadaha yar yar ee subaxnimada. Dukaammada badankood sidoo kale way furan yihiin, qabowga fiidkiina wuxuu ka dhigayaa wakhti wacan oo wax lagu iibsado. Soo booqde ayaa waqti fiican ku qaadan kara inuu ku soo biiro fiidkan, in kasta oo qol aad ku leedahay qolka hudheelkaaga quraac aamusnaan ah oo qiyaastii toban ku dhow ay ku habboonaan doonto inta badan booqdayaasha oo ka fiicnaanaya inay afarta sare u kacaan quraac subax hore oo subax ah.
Gelitaanka waxaa loo diidi doonaa muwaadiniinta reer binu Israa'iil iyo kuwa tusaya tigidhada iyo / ama fiisooyinka ka imanaya Israel.
"Boqortooyadaydu waxay sii noolaan doontaa oo keliya inta ay tahay waddan ay adag tahay in la soo galo, halkaasoo ajnabi uusan ujeedo kale lahayn, isagoo howshiisa fulinaya, laakiin inuu baxo." - Boqor Abdul Aziz bin Saud, c. 1930
Khariidad muujineysa shuruudaha fiisaha ee Sacuudi Carabiya, oo leh waddamo cagaaran oo leh fiiso la'aan
Sacuudi Carabiya waxay leedahay qaar ka mid ah siyaasadaha safarka ee ugu xaddidan adduunka, Iyo fiisooyinka horay loo qaado ayaa loo baahan yahay dhammaan ajaanibta doonaya inay soo galaan. Waxa kaliya ee ka reeban ayaa ah muwaadiniinta wadamada Golaha Iskaashiga Khaliijka. Sidoo kale laga reebay shuruudaha fiisaha ayaa ah ajaanibta ka dhoofaya garoomada diyaaradaha wax ka yar siddeed iyo toban saacadood, laakiin shuruudo kale oo badan oo soo galitaan ah, sida xeerka labiska iyo xaddidaadda haweenka kaligood socdaalka ah wali way socdaan.
Muwaadiniinta Israel iyo kuwa leh caddeynta booqashada Israel waxay noqon doonaan fiisooyinka loo diiday, inkasta oo kaliya ahaanshaha Yuhuudda iyo nafteeda aysan ahayn qodob ka reebitaan. (Si kastaba ha noqotee, waxaa jira warbixinno aan la soo koobi karin oo ku saabsan soo booqdayaasha oo saxeexaya sanduuqyada "Yuhuudda" ama "Atheist" ee ku yaal dalabkooda fiisaha oo dhib ku qaba.) Sucuudiga ayaa doorbidaya in aan la siinin fiisooyinka dumarka aan lala socon, laakiin ruqsadaha shaqada ayaa ku badan meelaha qaarkood —Es. kalkaaliyeyaasha caafimaadka, macallimiinta, shaqaalaha guryaha - waana suurtagal qof walba haddii cidda ku kafaala qaadaysa ay xiriirro ku filan leedahay.
Sida ugu fudud ee lagu soo galo dalka waa in la helo dhacdooyinka caalamiga ah fiisaha laga bilaabo Sharek (fiiri dhinaca kore ee midig ee xulashada bogga Ingiriiska). Dhacdooyinka qaarkood waxaa loo qoondeeyey "caalami", taas oo macnaheedu yahay inaad iibsan karto tikidhada iyo fiisada elektaroonigga ah ee 14 maalmood ah. Dhacdooyinkani way yara dhifnaan karaan, hase yeeshe, markaa horay u sii qorshee.
Fiisooyinka safarka waxay ku xadidan yihiin qaar ka mid ah wadayaasha gawaarida xamuulka qaada ee masaafada dheer iyo safarada diyaaradaha, laakiin guud ahaan waa la siiyaa lacag la'aan Si kastaba ha noqotee, way fududahay in la helo fiisaha transit-ka ee aad ku dhex mari karto Sucuudiga haddii aad ku sugan tahay waddan jaarka ah si sharci ah, oo aad u muujiso baahida loo qabo in loo kaxeeyo Sucuudiga loona aado waddan kale oo jaarka la ah.
Xajka Virtual July 29, 2020 (xajka) fiisooyinka waxaa soo siisa dowladda Sacuudiga iyada oo sii marineysa safaaradaha Sacuudiga ee adduunka oo kaashanaya masaajidda maxalliga ah. Xajiyiinta iyo kuwa fiisaha ku sii socdaa waa laga mamnuucay inay si xor ah ugu safraan boqortooyada oo dhan, xilliyada Xajka helitaanka fiiso noocay doontaba ha noqotee way ka sii dhib badan tahay.
Inta badan reer galbeedka ee waqtiga gaaban booqda Sacuudiga ayaa yimaada fiisooyinka ganacsiga, oo ubaahan casuumaad kafaalaqaade maxali ah kaas oo ay ansixiyeen Rugta Ganacsiga Sacuudiga. Marka martiqaadkan la hubiyo oo la xaqiijiyo, habka dhabta ah ee bixinta fiisaha waa mid deg deg ah oo aan xanuun lahayn, iyadoo wax laga qaadanayo hal maalin ilaa laba toddobaad. Ereygu wuxuu leeyahay "fiisooyinka cusub" (elektiroonig ahaan loo sameeyay) waxaa kaliya laga heli karaa hay'adaha ka jira dalka aad degan tahay. Helitaanka fiisada shaqada waa mid aad u dhib badan, laakiin sida caadiga ah loo-shaqeeyahaaga ayaa la tacaali doona inta badan waraaqaha.
Fiisooyinka dalxiiska waxaa la qorsheeyay in laga soo saaro 1-da Abriil 2018 qorsho ciqaab ah oo loogu talagalay dalalka u ogolaanaya muwaadiniinta Sacuudi Carabiya, laakiin bilowga sanadka 2019 fiisada ayaa wali sugeysa ogolaanshaha dowlada Sacuudiga, oo ah kii ugu dambeeyay ee qorshooyin la soo jeediyay laakiin aan wali la dhameystirin. Waxaa loo heli karay kooxo ugu yaraan afar ah safarro hagitaan ah illaa 2010 markii qorshaha la joojiyey iyada oo ballanqaadyo aan caddayn in dib loo soo celin doono mar dambe.
Baashaalku ma dhammaanaayo markaad fiiso hesho, maxaa yeelay fiisooyinka ma sheegaan taariikhda saxda ee ay dhacayaan. In kasta oo ansaxnimada lagu xusay bilo, kuwani maahan bilo reer Galbeed ah laakiin bilaha dayaxa, waana inaad adeegsataa jadwalka taariikhda Islaamka si aad u ogaato dhererka: fiiso saddex bilood ah oo la soo saaray "29/02/22" (22 Safar 1429, 1 March 2008) waxay soconaysaa illaa 29/05/22 (22 Jumada al- Awwal 1429, 28 Meey 2008), ma illaa 1 Juun 2008. Waxay kuxirantahay nooca fiisaha, ansaxnimada waxay ka bilaaban kartaa taariikhda la soo saaray or taariikhda gelitaanka ugu horeeya, iyo fiisooyinka gelitaanka badan waxay sidoo kale yeelan karaan xannibaadyo la xiriira inta maalmood ee markiiba la oggol yahay (badiyaa 28 maalmood booqasho kasta) iyo / ama imisa maalmood oo wadar ah ayaa loo oggol yahay muddada ansaxnimada. Tan oo dhami waxay keentaa jahwareer fantastik ah, mana aha wax aan caadi ahayn in jawaabo kala duwan laga helo safaaradda, cidda aad u shaqayso iyo Laanta Socdaalka.
Haddii aad haysato fiiso shaqo, fiisooyinka bixitaanka ayaa looga baahan yahay inay ka baxaan dalka. (Ganacsi, dalxiis, transit, ama fiisooyinka Xajka uma baahna ogolaansho bixitaan.) Maheli kartid fiiso bixitaan adoon saxeex ka helin cida aad u shaqayso, waxaana jiray kiisas dad ah oo aan awoodin in ay baxaan sababo la xiriira muranka loo shaqeeyaha ama xitaa macaamiisha. Tusaale ahaan, haddii shirkad ajnabi ah lagu dacweeyo Sucuudiga bixinta deyn la aan oo adiga laguu tixgeliyo inay tahay wakiilkeeda, fiisaha bixitaanka waa la diidi karaa ilaa dacwadda maxkamadda laga xalliyo.
Sacuudi Carabiya wuxuu leeyahay aad u adag xeerarka waxa la soo dejin karo: cabitaanka khamriga, hilibka doofaarka, aaladaha diiniga ah ee suniga ah iyo waxyaabaha qaawan (aad baa loo qeexaa) dhammaantood waa mamnuuc. Kumbuyuutarro, cajaladaha VCR iyo DVD-yada ayaa dhammaantood la qabtay xilli ka waqti si ay u kormeeraan mas'uuliyiinta. Haddii aadan hubin haddii filimka aad daawato ama ciyaarta fiidiyowga ee aad ciyaareyso loo arko mid ka soo horjeedda diinta Islaamka, waxaad u qaadataa inay tahay: waxay u badan tahay inay fiicnaan lahayd inaadan ula kaxaysan boqortooyada. Guud ahaan, in kasta oo, kormeerku aanu sidii hore ahaan jirin si dhammaystiran iyo iyadoo boorsooyinku wali raajic yihiin, daqiiqado raadinta ayaa ka reeban halkii laga xukumi lahaa. Qoysaska reer galbeedka ee ku socdaalaya fiisaha ku-meel-gaadhka ah ee rasmiga ah guud ahaan waxaa lagu ruxruxaa iyada oo la marayo kormeerka kastamka iyada oo la eegayo jaan-goyn.
Sacuudi Carabiya waxay ku leedahay 4 garoon diyaaradeed oo caalami ah Riyadh, Jeddah, Madiina, iyo Dammam. Gegada diyaaradaha ee Dhahran hada way ka xidhan tahay socodka dadweynaha, markaa rakaabka taga Bariga waxay imika u duulaan Dammam, ama Baxreyn u dhow (oo si fiican isugu xidhan) ka dibna baabuur ugu sii gudba Sucuudiga.
Sacuudi Carabiya waxaa u adeegta shirkadda diyaaradaha ee qaranka Saudiya. Saudia waxay leedahay diiwaan macquul ah oo xagga amaanka ah, laakiin inbadan oo diyaaradahoodu waxay kujiraan dhinicii hore, tayada adeega, madadaalada isdhaafsiga, iwm, waxay u egtahay inay hooseyso. Ku dhowaad dhammaan diyaaradaha Khaliijka iyo inta badan diyaaradaha waaweyn ee Yurub ayaa duulimaad ku taga Sacuudiga.
Xilliga Xajka, duulimaadyo badan oo charter ah ayaa kabaya shirkadaha duulimaadka loo qorsheeyay. Ajaanibta ku nool Sacuudi Carabiya waxay badanaa ka heli karaan qiimo dhimis duulimaadyada dibedda ka baxa inta lagu jiro Xajka. Duulimaadyada ka imanaya waddamada Muslimiinta ayaa ku duulaya xamuul badan oo xujey ah, mana doonayaan inay dib ugu laabtaan iyagoo maran.
SAPTCO wuxuu ka shaqeeyaa adeegyada basaska xuduudaha isaga gudba inta badan dalalka deriska la ah Sacuudi Carabiya iyo wixii ka baxsan, tusaale Qaahira. Malaha adeegga ugu caansan wuxuu udhaxeeyaa Dammam / Khobar iyo Manama, Bahrain. Waxaa jira adeegyo dhowr ah maalin kasta oo qiimahoodu yahay SR60 ama 6 Bahrain dinar, safarka guud ee King Fahad Causeway wuxuu qaataa ilaa 3 saacadood maalin wanaagsan; fiiri Baxrayn wixii faahfaahin ah.
Isgoysyada gawaarida waxaa laga helaa ku dhowaad dhammaan xuduudaha, inkasta oo kuwa gala Ciraaq ay xiran yihiin. Isgoysyada bari ee Baxrayn, Qatar iyo UAE aad ayaa loo isticmaalaa, kuwa kale oo dhan waa ka yar yihiin.
Ma jiraan wadooyin tareen oo isku xira Sacuudi Carabiya iyo dalal kale, in kasta oo Waqooyiga, weli waxaad ka heli kartaa jajabyo iyo qaybo ka mid ah Tareenka Hejaz ee mar u horseeday Dimishiq. Si kastaba ha noqotee, adeegga rakaabka u dhexeeya Riyadh iyo Quraayat, oo ku teedsan xadka Urdun ayaa la filayaa inay bilawdo inta lagu jiro 2019.
Doomaha Rakaabka ayaa usbuuciiba hal mar ama wax ka yar socda Masar iyo Suudaan ilaa dekado ku yaal galbeedka Sacuudi Carabiya. (Adeeggii Ereteriya wuu istaagay.) Qunyar socod ah, oo aan raaxo lahayn oo aan si gaar ah raqiis u ahayn, kuwani waa danayn ugu horreyn haddii aad u baahan tahay inaad gaadhigaaga ka gudubto. Mamnuuc aan rasmi ahayn oo reer Galbeedku wali way sii socon kartaa.
Geela xafladda Janadriyah - hadda ka dib looma isticmaali karo gaadiid dhaadheer
Oggolaanshaha safarka gudaha waa wax la soo dhaafay, markaa marka aad soo gasho Sucuudiga, waddanku waa kaa lo’daada. Waxaa jira, si kastaba ha noqotee, seddex ka reebitaan:
Goobo badan oo qadiimiga ah oo ku baahsan waddanka, sida Madain Saleh, ayaa u baahan oggolaansho. Matxafka Qaranka ee ku yaal Riyaad wuxuu soo saaraa kuwaas bilaash, laakiin waa inaad codsataa ugu yaraan toddobaad kahor.
Agagaarka Maka iyo Madiina waa ka mamnuuc dadka aan Muslimka ahayn; taa bedelkeeda, kuwa fiisooyinka Xajka Virtual July 29, 2020 waa laga mamnuucay inay ka baxaan aagga (iyo meelaha loo maro sida Jeddah). Aagga ka-saarista ayaa si wanaagsan loo muujiyey.
Qaar ka mid ah meelaha fogfog, gaar ahaan agagaarka xuduudaha Ciraaq iyo Yemen, waa aagag milatari oo xaddidan. Aad ayey u yar tahay inaad si shil ah ugu dhex dhacdo iyaga.
Sacuudi Carabiya waa waddan ballaadhan, taas oo duulimaadka ka dhigaysa waxa kaliya ee raaxada leh ee lagu safri karo masaafo dheer. Shirkada diyaaradaha ee Saudia ayaa leh jadwalada ugufiican, duulimaad saacadle ah oo mashquul badan Riyadh-Jeddah qaybta (90 daqiiqo) iyo socodka hal-ku-kaca qiimaha ku kacaya 280 riyaal Sacuudi ah (SR) macquul ah (ama qiyaastii US $ 75). Tartame qiime jaban NAS xitaa way ka jaban tahay haddii aad horay u sii ballansato, laakiin jadwalkooda ayaa ah mid aan badnayn, isbeddellada ayaa lacag kugu kici doona oo cunnada kuma saaran.
The Shirkadda Gaadiidka Dadweynaha ee Sacuudi Carabiya (SAPTCO) wuxuu ka shaqeeyaa basas masaafo dheer oo isku xira dhammaan darafyada dalka. Basasku waa kuwo casri ah, hawo qaboojiye leh oo raaxo leh, laakiin badiyaa gaabis ah, saldhigyada basaskana waxay inta badan u jiraan dhowr kiilomitir oo ka fog Xarunta Magaalada. The Riyadh-Damam service, tusaale ahaan, wuxuu ku kacayaa SR60 wuxuuna qaadanayaa ilaa 6 saacadood.
Adeegyada “VIP” ee gaarka ah ayaa ka shaqeeya Riyadh-Dammam iyo Riyadh-Waaxaha Baxrayn. Lacag dheeraad ah oo ku saabsan 50%, waxaad heleysaa adeegyo toos ah, oo aan joogsi lahayn oo ka socda Xarunta-ilaa-magaalada Xarunta, fadhiga raaxada iyo raashin saaran. Waxay yihiin qiime aad u wanaagsan, haddii jadwalada aan badnayn ay u dhigmaan qorshooyinkaaga.
Fasalka koowaad ee tareenka Sacuudiga
Shabakada tareenka ee Sacuudi Carabiya ayaa horey u ahaan jirtay mid aan horumarsaneyn, laakiin waxaa jiray culeys weyn oo lagu balaarinayo caymiska tareenka. Khadkii hore ee u dhexeeyey Riyadh, Hofuf iyo Dammam waxaa lagu daray khad cusub oo woqooyi-koonfureed u dhexeeya Riyadh, Buraydah iyo Al Qurayyat oo ku dhow xadka Urdun. Sannadka 2018, xiriiriye xawaare sare oo cusub, ayaa Wadada xadiidka sare ee Xaarameyn, isku xirka Jeddah oo ay la socdaan magaalooyinka barakaysan ee Mecca (45 daqiiqo) iyo Madiina (2 saacadood), waa la furay.
Jahwareer, tareen kasta waxaa wada shirkad kale. Khadka caadiga ah ee u dhexeeya Riyadh oo Damman waxaa ku shaqeeya Ururka Wadooyinka Tareenka Sucuudiga halka Shirkadda Tareenka Sucuudiga waxay maamushaa tareenka waqooyiga-koonfurta. Tareenka Xawaaraha Sare ee Xaaraan waxay ku shaqeysaa degelkeeda. Tigidhada khadka tooska ah ayaa loo heli karaa dhammaan adeegyada. Waxaa lagugula talinayaa inaad tikidhada horay u sii iibsato maadaama tareenada badanaa la iibiyo.
Heerka ayaa aad u sarreeya oo leh dhammaan adeegyada rakaabka ee bixiya fasalo labaad iyo ganacsi, oo leh kuraas maqaar oo dheeri ah iyo 2 + 1 fadhiga. Tareennada u dhexeeya Riydah iyo Damman, fasalka ganacsigu xoogaa wuu ka khafiifsan yahay maaddaama uu leeyahay fasal dheeri ah, oo loogu magac daray Rehab, oo isbarbardhigaya ganacsiga adeegyada kale. Adeegyada Waqooyiga-Koonfurta, qolalka jiifka ee gaarka loo leeyahay ayaa sidoo kale lagu heli karaa qiimo jaban. Ku dhowaad dhammaan tareennada waxay leeyihiin gaari kafateeriya oo u adeegta cabbitaanno iyo cunno fudud, iyo sidoo kale adeegga riix-trolley oo waxaa ku yaal qolal fadhi ku filan oo sugitaan ah saldhigyada. Sidoo kale, ka taxaddar gawaarida badankood waxay keydiyaan kuraasta horay u jeeda ee hore ee gaari kasta ee qoysaska.
Kirada baabuurta waa la heli karaa oo baatroolku waa kan ugu raqiisan adduunka. Tayada jidadka waa mid aad u isbeddel badan, marka laga reebo jidadka waaweyn ee isku xira magaalooyinka waaweyn, kuwaas oo guud ahaan aad u fiican. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira sababo muhiim ah oo looga fikiro laba jeer kirada baabuurta. Wadanku wuxuu leeyahay qaar ka mid ah heerka shilalka ugu sareeya adduunka. Shilalka waa wax caadi ah, oo haddii booqde ku lug yeesho mid ka mid ah, waxay la kulmi lahaayeen nidaamka sharciga Sucuudiga ee ciqaabta daran; ka eeg meelaha kale ee boggan digniinta ku saabsan taas. Sidoo kale la soco in shil kasta oo ku lug leh ajnabi iyo muwaadin Sacuudi ah si toos ah loogu arko qaladka shisheeyaha marka loo eego sharciga Sucuudiga, iyadoon loo eegin cidda khaladkeedu run ahaantii yahay. Helitaanka kirada baabuurtu waxay ku egtahay dadka 21 iyo wixii ka weyn.
Haddii aad ku jirto shil baabuur dhammaan dhinacyada waxaa looga baahan yahay inay joogaan halka ay ku yaalliin oo ay sugaan Booliska Taraafikada (wac 993) si ay u soo baxaan, oo qaadan kara ilaa afar saacadood. Ingiriisiga uma badna inuu ku hadlo booliska, xitaa magaalooyinka waaweyn, marka isku day inaad isticmaasho waqtiga sugitaanka si aad ugu diyaariso turjubaan. Booliisku wuxuu soo saari doonaa warbixin shil ah, oo ay tahay inaad u qaadatid saldhigga taraafikada oo lagu shaabadeeyo dhowr jeer safaf kala duwan (tani waxay qaadataa inta badan subaxdii). Kaliya markaa kadib ayaa wax laga qaban karaa wixii waxyeelo ah ee gaadhiga soo gaadha, maadaama shirkadaha caymiska aysan bixin doonin wax shaqo ah oo jirka ah warbixin la’aan.
Maahan wax cusub in booliska taraafikada ay xalliyaan dhacdada halkaas ka dhacday ka dibna ay go'aamiyaan dhinaca dambiilaha ah ayna go'aansadaan magdhow. Marka, hadday khaladkaaga tahay booliska ayaa ku weydiin doona inaad qaddar siiso dhinaca kale, laakiin waajib kuguma aha inaad sidaas bixiso.
Si caan ah, Sacuudi Carabiya waxay ka mamnuuci jirtay haweenka wadista gawaarida waddooyinka dadweynaha. Si kastaba ha noqotee, sharciga ayaa la beddelay Juun 2018, haweenkuna hadda waa loo oggol yahay inay ku kaxeeyaan boqortooyada, inkasta oo kaliya ay oggolaansho ka haystaan ​​ilaaliyahooda ragga.
Magaalooyinka dhexdooda, tagaasida ayaa ah habka kaliya ee wax ku oolka ah ee gaadiidka. Heerarka guud ee waddanka oo dhan, qiimaha jaban ayaa laga bilaabaa SR5 oo laga gooyaa SR1.60 / km, laakiin ka baxsan Riyadh inta badan waa inaad jabisaa qiimaha hore. Rakaabka kali ah waxaa lafilayaa ineey fariistaan ​​dhanka hore ee darawalka: tani waxay leedahay faa iidooyinka inaad kudhowdahay qaraxa buuxa ee air-con iyo inaad sahlanaato inaad gacmaha kor u taagto si aad wadada u tustid.
Buugga weedhaha Carabiga waa afka rasmiga ah ee Boqortooyada. Waxaa jira lahjado badan oo lagaga hadlo dalka oo dhan, laakiin kuwa ugu muhiimsan ayaa ah Carabi Hejazi, asal ahaan ka soo jeeda deegaanka Hejaz Jeddah iyo lingua franca wax ku ool ah, iyo Najdi Carabi, ayaa lagaga hadlay agagaarka Nejd Riyadh.
Dad badani waxay fahmaan oo ku hadlaan xoogaa Ingiriis ah, in kastoo si muuqata uga hooseeyaan sida, tidhaahdaan, UAE ama Qatar. Buugga weedha Hindiga, Buugga weedhaha Urdu, iyo buugga weedhaha Bengaali ayaa si ballaadhan loogu adeegsadaa suuqyada iyo qurba-joogta ka timaadda qaaradda-hoosaadyada. Dhamaan luuqadaha waaweyn ayaa looga hadlaa suuqyada Makka. Waxaa sidoo kale jira ajaanib tiro yar oo kuhadla Filipino ku hadla sidoo kale.
Ku dhowaad dhammaan calaamadaha waddooyinka waxay ku qoran yihiin Ingiriis iyo sidoo kale Carabi, in kasta oo inta badan calaamadaha xaddidaadda xawaaraha ay isticmaalaan oo keliya lambarrada Carabta.
Meelaha ugu caansan ee laga yaqaan Sacuudi Carabiya waxay u badan tahay labada magaalo ee barakaysan ee Islaamka; Maka iyo Madiina. Si kastaba ha noqotee waa mamnuuc dadka aan Muslimka ahayn inay galaan magaalooyinkan.
Waxaa jira shan meelood oo UNESCO ah oo Dunida ku yaal. Waxay ka mid yihiin Goobta Arkiyooloji ee Al-Hijr (Madâin Sâlih) ee Hejaz iyo Degmada At-Turaif ee Diriyah.
Magaalada qadiimiga ah ee Jeddah.
Qaab dhismeed casri ah oo casri ah oo ku yaal caasimada Riyaad.
Cidlo badan oo lamadegaan ah - lamadegaanka Carbeed ayaa dalka intiisa badan sameeya.
Lacagta Sacuudiga waa Riyaal Sacuudi ah, oo lagu muujiyey astaanta “ريال"Ama"SR”(Lambarka ISO: SAR) Waxay ku xaddidan tahay 3.75 riyaal doolarka Mareykanka. Riyaalka waxaa loo qaybiyaa 100 xalaalas, oo loo isticmaalo in lagu calaamadeeyo qiimayaasha qaarkood, laakiin, ficil ahaan, dhammaan lacag-bixinta waxaa lagu soo koobay riyaalka ugu dhow waana laga yaabaa inaad waligaa arki maysid wax shilimaad xalaal ah. Biilasha waxay ku yimaadaan qiimayaasha 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, iyo 500 riyaal, oo leh laba taxane oo kala duwan oo wareegaya.
Riyaalka ayaa si wax ku ool ah sidoo kale loogu dhejiyay diinaar Baxreyn ah saamiga 10: 1. Haddii aad ka fikirayso inaad u safarto Baxrayn, run ahaantii dhammaan ganacsiyada ku yaal Baxrayn way aqbali doonaan riyaal, laakiin diinaarka si fudud looguma beddeli karo Sacuudi Carabiya.
Sacuudi Carabiya wali waa bulsho inteeda badan lacag kaash ah. Ganacsiyada waaweyn ayaa aqbali doona dhammaan kaararka, si kastaba ha noqotee ganacsiyada yar yar badankood waxay aqbalaan kaararka deynta iyo kaararka deynta laakiin qaar ayaa diidi doona haddii qaddarku yar yahay. ATM-yada ayaa meel walba yaal, in kasta oo kuwa bangiyada yaryar badankood aysan aqbalin kaararka shisheeye; Samba, SABB iyo ANB ayaa laga yaabaa inay yihiin sharadkaagii ugu fiicnaa. Beddelayaasha lacagta waxaa laga heli karaa sookiyada, laakiin waa ku yar yihiin meelaha kale. Lacagta qalaad guud ahaan ganacsatada ma aqbalaan.
Qiimayaashu guud ahaan waa kuwo aad u sarreeya: jaantus ku saabsan US $ 50/100/200 miisaaniyadda, dhexdhexaadka iyo kharashaadka safarka maalinlaha ah.
Gelitaanka guud ahaan lama filayo, in kasta oo shaqaalaha adeegga marwalba ay ku faraxsan yihiin soo dhaweyntooda iyo in tikidhada tagaasida inta badan la soo koobo (ama, aan caadi ahayn, hoos loo dhigo). Makhaayadaha qaaliga ah badanaa waxay dharbaaxaan 10% khidmad adeeg ah, inkasta oo qawaaniinta laaxin dartiis shaqo-bixiyayaal badan ay si fudud ula wareegaan (weydii shaqaalahaaga suga haddii ay helaan mid ka mid ah iyo haddii kale haddii aad jeclaan lahayd inaad iyaga u sheegto). Ma jiraan canshuuraha iibka ee Sacuudiga, arrintana, ma jiraan wax canshuur ah oo dakhli soo gala.
Maxaa la iibsadaa
Waxyaabo yar oo maxalli ah ayaa xiisaynaya dalxiisayaasha. Taariikhaha maxalliga ah ee koray waa kuwo tayo sare leh, iyo agabyada diimeed ayaa si ballaaran loo heli karaa, laakiin ku dhowaad si gaar ah ayaa loo keenaa. Nuqulada Qur'aanka waxaa lagu soo saaray noocyo badan oo noocyo ah waxaana lagu iibiyaa qiimo aad u hooseeya. Zam zam biyaha ayaa laga heli karaa dhamaan gobolada Galbeedka iyo dhamaan garoomada diyaaradaha.
Roogag waa iibsi la jecel yahay, badankoodna waxay ka yimaadaan Iran oo u dhow. Jeddah gaar ahaan waxay leedahay roogag fara badan, qaar badan oo ka mid ah waxaa keenay xujeyda halkaas ku iibisa si ay uga caawiyaan maalgalinta safarkooda Mecca.
Suuqa waaweyn ee dahabka iyo dahabka ayaa caan ku ah dhammaan magaalooyinka waaweyn. Gorgortanku waa wax caadi ka ah dukaamada ugu yar yar ama dhexdhexaad ah. Maka iyo Madiina waxay bixiyaan noocyo badan oo ka mid ah shandadaha, dharka, dahabka, joornaalada, xusuusta, qalabka caruurtu ku ciyaaraan, cuntada, cadarka, fooxa, iyo suugaanta diinta, maqalka iyo agabyada.
Xarumo waaweyn oo hawo qaboojiye leh leh iyo dukaamo raashin (tusaale ahaan Safeway, Geant, Carrefour) ayaa ku kala firirsan boqortooyada oo dhan.
Madadaalada Sacuudi Carabiya waa mid ku tiirsan qoyska. Waxaa jira waxqabadyo yar oo loogu talagalay lammaanaha ama kali-kali. Ragga kelida ah looma ogola meelaha qoyska ka mid ah: xeebaha qoysaska waxaa loo kala qaataa xeebaha bachelorka, tusaale ahaan. Haweenka waxaa laga filayaa inay weheliyaan nin qaraabo ah oo fagaarayaasha ah, in kastoo dumarka kelida ah laga yaabo in la dhigo meelaha qoyska ka tirsan.
Dalxiisyada lamadegaanka ayaa si gaar ah caan ugu ah carabta hooyo. Waxaa jira dad yar oo dalxiis ah oo ka shaqeeya safar dalxiis, haddii ay jiraan, laakiin kirada ATV waxaa badanaa laga helaa hareeraha waddooyinka ee hareeraha magaalooyinka waaweyn dadka ajaanibka ah waxay badiyaa abaabulaan safarro kolonyo ah oo ay ku aadaan cidlada. Rubuca Madhan wuxuu leeyahay muuqaal qurux badan, wuxuuna ubaahan yahay diyaargarowga ugu badan.
Ciida cas cas banaanka Riyadh.
Quusitaanka Scuba waxaa caan ka ah xeebaha Badda Cas ee Sacuudi Carabiya. Jeddah ayaa leh tiro ka mid ah wadayaasha quusin.
Jardiinooyinka madadaalada (qaar badan oo ka mid ah gudaha) inta badan waxaa laga helaa dukaamada ama xeebta agteeda. Magaalooyin badan oo waaweyn waxay leeyihiin jardiinooyin dadweyne iyo jardiinooyin yaryar. Fardo fuulista, raacida geela, iwm sidoo kale waxaa laga heli karaa meelaha lagu ordo ee faraska iyo xeebo caan ah qaarkood. Huteelo badan oo heer sare ah ayaa bixiya nashaadaad khafiif ah (gaar ahaan hudheelada ku yaal xeebta).
Ka dib in ka badan 30 sano oo mamnuuc ah wadarta guud, tiyaatarada filimada waxay bilaabeen inay markale furaan boqortooyada. Intaas waxaa sii dheer, dukaamada DVD-gu way badan yihiin, in kasta oo xulashooyinka badanaa la macangagsan yahay ama / la faafreebay. DVD-yada ku jira Sacuudi Carabiya waa kuwo aan kala go ’lahayn Gobol 2, in kasta oo DVD-yada bootlegleg (oo si ballaadhan looga heli karo dukaamada yar yar ee fiidiyowga ah) badiyaa waa gobol-la’aan, badanaana lama kormeero sidoo kale. TV-ga Satelite-ka iyo madaddaalada laga soo dajiyo internetka ayaa sidaas caan ku ah.
kulan Video waa waaritaan weligiis ah oo dhalinyarada Sucuudiga ah, iyo mid ay sifiican uga faa'iideystaan ​​tafaariiqleyda maxalliga ah. Dukaamada ciyaarta fiidiyowga ayaa ku yaal dhammaan magaalooyinka waaweyn. Ciyaaraha saxda ah waxaa bixiya inta badan dukaamada waaweyn, maxaa yeelay soo dejinta Mareykanka ama Yurub celcelis ahaan ~ SR270 (~ US $ 70), halka kuwa yar yar badiyaa ay kaliya bixiyaan bootlegs (kuwaas oo sharci darro ah, laakiin wali faa'iido badan ku filan oo inta badan iibiya) ) qiimo aad u hooseeya oo ah SR10-15 ($ 2.5- $ 4). Wii iyo Xbox 360 bootlegs ayaa ugu sarreeya, laakiin dukaamada qaarkood waxay bixiyaan Nintendo DS iyo ciyaaraha PSP sidoo kale, oo laga soo dejiyey warbaahinta laga saari karo macaamiisha markii la codsado.
Cunitaanku waa mid ka mid ah raaxooyinka yar ee loo ogol yahay Sacuudi Carabiya, tirakoobka buurnida ayaa muujisay in inta badan dadka reer Sucuud ay ku raaxaystaan ​​inta ay kari karaan. Si ka duwan ganacsiyada kale ee macaamiishooda ka erya waqtiga salaadda, makhaayadaha intooda badani waxay u oggolaan doonaan dadka wax cunaya inay hareeraha laalaadaan oo ay wax ku cunaan albaabbada gadaashiisa inta lagu jiro salaadda. Macaamiisha cusub guud ahaan looma ogola inay soo galaan ilaa salaada laga baxo.
cunto Fast waa ganacsi aad u weyn gudaha Sacuudi Carabiya, oo leh dhammaan tuhmanayaasha caadiga ah (McDonald's, Burger King, Pizza Hut, Subway) mana aha silsilado yar oo si dhif ah ugu baxda meel ka baxsan Ameerika meelo kale (sida Hardee's, Little Caesars). Cunnooyinka si aan kala sooc lahayn loogu adeego shiilan iyo qiimaha Coke waa SR10-20. Qaar ka mid ah kudayayaasha deegaanka ee mudan in la baaro waxaa ka mid ah
Cunto digaag duban Al Baik
Al-Baq - digaag la shiilay- oo ku yaal Jeddah, Mecca, Medina iyo Taif laakiin maahan Riyadh
Baak - Pizza (qolof khafiif ah oo aad ufiican), digaag la shiilay, lasagna, ismaris
Koonfur. Silsiladda ismariska ee Sucuudiga, oo la aasaasay 1988.
Herfy Burger. Silsiladda cuntada ugu dhakhsaha badan dalka, 100% Sucuudigu leeyahay.
Guriga Donuts - “Cunnooyinka ugu Fiican Mareykanka” - silsilad ay bilaabeen ardayda Sucuudiga ah ee wax ku soo bartay Ameerika
Rakhiis weli waa aan la tirin karin dukaamada curry oo ay maamusho oo loogu talagalay bulshada weyn ee Sacuudi Carabiya, Hindiya, Baakistaan, iyo Bangaladesh, oo u adeega dad badan thali saxan oo ah qiimaha lagu raaco qaaradaha ee ka hooseeya SR10. Kaliya ha filan fillooyinka sida qaboojiyaha.
Cunnada Bariga Dhexe ee shwarma (doner kebab) waxaa si ballaaran looga heli karaa kala goysyada yar yar ee gaarka loo leeyahay, iyadoo SR 3-4 uu yahay qiimaha caadiga ah ee loo yaqaan 'sandwich'. Masaarida shiidan fawaajada fawaaxda qalad waa meherad kale oo raqiis ah, dukaamadaasna sidoo kale badanaa way bixiyaan felafel (kubbadaha digaaga) iyo noocyo badan oo saladh ah iyo faashad sida hummus (Jinka digaaga) iyo tabbouleh (salad dhir).
Helitaanka makhaayado u adeega cunnada dhabta ah ee Sucuudiga ayaa si la yaab leh u adag, in kasta oo hudheelo waaweyn oo waaweyn ay leeyihiin makhaayado Carabi ah. Sacuudiigaaga deegaanka ama martida loo yahay ee martida loo yahay ayaa laga yaabaa inay ku tusaan meelaha qaar ama, haddii aad runtii nasiib leedahay, casuumaad casho guriga ah.
Mandi - Digaag ama hilib digaag lagu kariyey bariis dheriga dabka ka korreeya.
Wax badan oo qurxoon qaabka kaliya ee madadaalada loogu talagalay bachelor-yada ayaa ah meel walba makhaayadda qaxwaha, kaas oo u adeega ma aha oo kaliya kafee iyo shaah, laakiin tuubooyinka biyaha (shiisha) tubaakada dhadhanka leh. Kuwani si adag ayaa u ah domain lab ah. Dadaal dowladeed oo lagu yareynayo sigaar cabista magaalooyinka waaweyn sida Jeddah iyo Riyadh, xarumaha bixiya shiisha ama waxaa lagu masaafuriyey hareeraha magaalooyinka, ama waxaa lagu bixiyaa qabanqaabooyin fadhiga bannaanka ah oo gaar ah.
Haddii, dhinaca kale, aad raadineyso hazelnut frappucino, Starbucks iyo tartamayaasheeda legion waxay saldhig adag ku yeesheen suuqyada Boqortooyada. Kuwani caadi ahaan way soo dhoweeyaan haweenka, inkasta oo 2008 la arkay dhowr xarig oo lamaanayaal aan is qabin “isku milmay”.
Sida qaxwada (kahwa) lafteeda, iskuday malmal, oo lagu sameeyay qaabka Baadiyaha. Mararka qaar waxaa lagu carfiyey kaarasmo, waa mid xoog badan oo dhadhan fiican leh, gaar ahaan lagu sakhraamay taariikho cusub. Shaah (Chai) badanaa wuxuu la yimaadaa dollops of sonkor iyo laga yaabee in yar oo caleemo reexaanta ah (na'ana).
Sida meelo kale oo ka mid ah Gacanka, Sucuudigu waa taageerayaal waaweyn oo kala duwan cabitaanka miraha, oo ka bilaabma midka caadiga ah (tufaaxa, oranjada) illaa iyo kan layaabka leh (muuska-liin-caano-walnut, qofna?).
Noocyada aan khamriga ahayn ee cabitaanka khamriga ayaa caan ah. Laba ka mid ah kuwa ugu caansan waa Champagne-ka Sacuudiga, asal ahaan cabitaanka tufaaxa iyo Sprite ama biyaha soodhaha, iyo cabitaanka malt, yacni biir aan khamri ahayn, marwalba macaan oo badanaa si xoog leh ugu dhadhamma cambe, strawberry, tufaax, liin iwm.
Halka lagu joogayo Sacuudi Carabiya
Hoteellada noocyadooda kala duwan ayaa laga heli karaa Boqortooyada oo dhan. Inta badan magaalooyinka dalxiiska (sida Makkah, Madinah, Taif, Al Abha) sidoo kale waxay yeelan doonaan rakka-maafroosha aad u jaban oo waasac ah (guryo kiro ah oo muddo gaaban ah). Milkiilayaasha Shigka-maafroosha guud ahaan way ka sii jilicsan yihiin meelaha lagu raaxeysto ee hoteelada. Badanaa, waxay la xiriiri doonaan dadka ilbaxnimada u muuqda (guud ahaan qoysaska) waxayna u fidiyaan dalab. Qiimaha shigka-mafrooshas iyo hoteelada yaryar had iyo jeer waa gorgortan heer sare ah. Hoteellada yar-yar waxay aqbali doonaan oo keliya lacag caddaan ah, sida caadiga ah ka hor.
Hoteello waaweyn oo qaali ah ayaa ku badan dhammaan magaalooyinka waaweyn. Ka dib markii lulkii uu sababay kacdoonkii 2003, qiimuhu marba kor ayuu u kacayay, waxaadna filan kartaa inaad woqooyiga US $ 200 ka bixiso habeenka usbuuca hudheel wanaagsan oo ku yaal mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Sucuudiga. Taas bedelkeeda, waxaad badiyaa heleysaa adeeg aad u fiican iyo karti aad uga shaqeysid xaddidaadaha qaarkood (tusaale, makhaayadaha makhaayadaha u furan saacadaha salaadda iyo adeegga qolka maalintii inta lagu jiro Ramadaanta)
Caafimaadkaaga ku joog Sucuudiga
Ma jiraan khatar caafimaad oo weyn oo ka dhalata safarka Sacuudi Carabiya: biyaha guud ahaan waa la cabi karaa cuntadana badanaa, laakiin had iyo jeer, ma ahan nadaafad. Wax talaal ah looma baahna safarka guud ee Boqortooyada, laakiin xujeyda ku biiraya Xajka iyo xaddiga aan caadiga ahayn ee xujaajta ee ka kala imanaya daafaha dunida, ayaa loo baahan yahay talaallo taxane ah oo dhammaystiran oo shuruud u ah soo gelitaanka. Faahfaahin ka fiiri maqaalka Xajka Virtual July 29, 2020
Sigaarka waa dembiga kaliya ee aan la mamnuucin, sidaa darteedna qof walbaa sigaar ku caba meel kasta: lobbiyada hudheellada, fadhiyada garoonka diyaaradaha, maxkamadaha cuntada ee laga dukaameysto, wadayaasha tagaasidahooda, iwm. .
Boqortooyadu waxay leedahay nidaam ballaadhan oo daryeel caafimaad oo heer qaran ah, laakiin adeegyada ay bixiso barnaamijkani waa kuwo aasaasi ah. Isbitaalada gaarka loo leeyahay badanaa waxaa ka shaqeeya oo ay ka qayb qaataan la-hawlgalayaal shisheeye. Xarumahani waxay u dhexeeyaan si heer sare ah oo heer sare ah oo aad u sareeya oo aad qaali u ah. Farmasiiyada si ballaaran ayaa loo heli karaa oo rijeeto qoro looma baahna inta badan daawooyinka. Daawooyinka cilmu-nafsiga leh si adag ayaa loo xakameeyaa waxaana laga heli karaa oo keliya farmasiiyada dawladda.
Biyaha magaalooyinka waaweyn guud ahaan waxaa loo arkaa mid amni ah, in kasta oo aysan had iyo jeer si gaar ah dhadhan u lahayn, xagaaguna wuxuu noqon karaa mid aad u kulul. Xilliga jiilaalka biyaha daadadku waxay ku daadan karaan taangiyada, iyadoo lagu qiyaaso 70% in lagu keydiyo Jeddah oo ay saameeyeen daadad xoog leh bishii Janaayo 2011 iyo kiisaska qaarkood ee cudurka daacuunka.
Biyaha dhalada ku jira ayaa si fudud loo heli karaa oo raqiis ah SR2 ama ka yar dhalo 1.5 litir ah, sidaa darteed martida badan iyo deganayaasha ayaa doorta inay si amaan ah ugu ciyaaraan. Dad badan oo degan waxay doorbidaan inay ka cabaan biyaha la cabbo xarumaha wax lagu nadiifiyo
Waxaa jira shaqooyin aad u yar oo loogu talagalay qurbajoogta Sacuudi Carabiya.
Si aad u hesho fiiso shaqeynaya, waa inaad leedahay kafaala-qaade Sucuudiga ah. Kadib si aad u hesho fiisaha bixitaanka, waxaad u baahan tahay saxeexa wakiilkaaga. Tani waxay u horseedi kartaa dhibaatooyin waaweyn. Macallimiinta ESL-ka waxay shaqo ka heli karaan Sacuudi Carabiya iyaga oo wata Shahaadada Bachelor-ka iyo shahaadada TESOL. Macallimiinta ESL ee Sacuudi Carabiya waxay filan karaan inay kasbadaan 8,000 - 13,000 SR (bishiiba) waxayna badanaa wax ku bari doonaan 20 - 30 saacadood toddobaadki. Qandaraasyada sida caadiga ah waxaa ka mid noqon doona hoyga, duulimaadka, iyo daryeelka caafimaadka. Xulashada waxaa sida caadiga ah la siiyaa macallimiinta ragga ah, khibrad shaqo oo horena waa loo baahan karaa.
Nabdoonow oo iska ilaali Khiyaanooyinka ka jira Sacuudi Carabiya
Xaqiiqda marka laga hadlayo, khatarta ugu weyn ee soo booqde Sacuudi Carabiya waa wadista halista ah: kaxee ama kaxayso darawaladaada si taxaddar leh suunkaagana xir.
Kacdoon heer hoose ah oo bartilmaameedsanaya shisheeyaha guud ahaan iyo gaar ahaan reer galbeedka ayaa wali sii socda. Mowjadaha rabshadaha 2003-2004 waxaa hareeyay xasuuq bahalnimo ah oo ay gaysteen ciidamada amaanka ee Sucuudiga mana jirin wax weeraro ah oo waaweyn oo ka dhacay magaalooyin dhowr sano, amaanka ayaa wali ah mid adag oo caqli gal ah inaadan aad u soo jeedin naftaada. Shisheeyaha waa inay ka diiwaangeliyaan joogitaankooda safaaraddooda ama qunsuliyadda. Nidaamyada digniinta deg-degga ah ee adeegsanaya emaylka iyo farriimaha taleefanka gacanta waxaa dawlado badan u hayaan shaqaalaha martidooda ah.
Afar dalxiisayaal Faransiis ah, oo qayb ka ahaa koox weyn oo xero ku taal, ayay argagixisadu ku dileen oo ku dileen meel u dhow Madain Saalax horraantii 2007. Sababtaas awgeed, wehelinta booliska khasabka ah - oo noqon karta waayo-aragnimo xiiso leh, laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa wax laga xumaado , Dhibaatooyinka xaddidan - waxaa mararka qaarkood loo bixiyaa safarka ka baxsan magaalooyinka waaweyn, meelaha sida Abha, Najran iyo Madain Saleh.
Halka Sacuudiga uu leeyahay mid ka mid ah heerarka ugu hooseeya ee dambiyada adduunka, Heer asal ah oo xatooyo daneeye aan rabshad lahayn sida jeeb-jeebka iyo boorsada boorsada ayaa jirta. Quful albaabada oo ku hay waxyaalaha qiimaha leh qofkaaga.
Bulshada Sacuudi Carabiya waxay ku dadaalaysaa inay kala ilaaliso ragga iyo dumarka, laakiin faraxumeynta galmada - leers, jeers iyo xitaa in la raaco - waa niyadjab caadi ah. Kicinta ruckus ama si fudud cod dheer u weydiiya qofka wax dhibaya ma Muslim baa? (“Miyaad Muslim tahay?”) Inta badan way ku filnaan doontaa inay iyaga ka nixiso. Haweenka waa inay maanka ku hayaan in sharciga Sacuudiga, afar markhaati oo madax banaan looga baahan yahay inay markhaati furaan si qof loogu xukumo kufsi. Ka gaabinta soo saarista afarta markhaati ee ragga ah waxay keeneysaa in haweeneyda lagu helo galmo guur kahor ama sino (taas oo ah dambiyo sida uu qabo sharciga Sacuudiga) taa badalkeeda.
Ku xad-gudubka sharciga Sucuudiga ayaa u horseedi kara booqde inuu la xiriiro booliska deegaanka iyo nidaamyada cadaaladda. Nidaamka cadaalada ee Sucuudiga ayaa caan ku ah qallafsan isla markaana wax ixtiraam ah siinaynin dadka aan Sucuudiga ahayn, safaaradihuna waxay ku bixin karaan oo keliya caawimaad xadidan xaaladahaas. Eeg Ixtiraamka sida looga fogaado dhibaatada.
Dadka soo booqda Sacuudi Carabiya waa loo baahan yahay in la ixtiraamo heshiisyada maxalliga ah, gaar ahaan arrimaha Islaamka. In kasta oo dadka ugu horeeya ee Sacuudi Carabiya inta badan lagu soo celiyo sheekooyinka qoor goynta, goynta iyo karbaashida, qallafsanaanta buuxda ee sharciga Sucuudiga ayaa loogu talagalay dadka tahriibiya daroogada. Iyada oo la adeegsanayo qaab caqli gal ah waad fiicnaan doontaa, oo haddii martidu si qalad ah u keento dembi yar, falcelintu guud ahaan waxay noqon doontaa madadaalo halkii ay ka ahaan lahayd xanaaq.
Sharciga iyo anshaxa
Xeerarka dhabta ah ee muhiimka ah ee laga taxadarayo waxay ku qoran yihiin sharciga Sacuudiga oo qoran, iyadoo dambiilayaashu ay ku xiran yihiin awood buuxda nidaamka ciqaabta sumcad xumada Sacuudiga. Marka lagu daro dambiyada muuqda sida dilka (ciqaab dil) iyo xatooyo (gacan goyn loogu sameeyo dambiilayaasha soo noqnoqda), falalka loo arko dambiyada culus waxaa ka mid ah sinaysiga, khaniisnimada iyo haysashada khamriga ama daroogada.
Kala soocida galmada
Ma jiraan haween ku jira qolka jimicsiga
Qaar badan (laga yaabee inta badan) meelaha nolosha ee Sacuudi Carabiya waxaa lagu kala saaraa jinsi si loo hubiyo in ragga iyo dumarka aan qaraabada aheyn aysan laheyn wax fursad ah oo "iskudhaf" (khulwa, dambi ciqaab mudan). Marka loo eego sharciyada kala soocida, dadka oo dhan waxay u qaybsan yihiin saddex qaybood:
Qoysaska. Qeybta aasaasiga ah ee nolosha Sacuudiga, qoysaska waxay ka kooban yihiin haween ay wehliyaan kuwooda mahram (mas'uuliyiinta labka ah ee sharciga ah) - aabe, walaal, nin, adeerkiis, adeerkiis - iyo caruur.
Ragga kelida ah (bachelor). Ragga aan la socon qoysaskooda. In kasta oo si caadi ah loo adeegsado ereyga "bachelor", haddana kuma xirna in ninku guursaday iyo in kale; ninku wuxuu ka qadeyn doonaa qeybta bachelor-ka qadada markuu kaligiis joogo iyo qeybta qoyska qado marka uu la joogo xaaskiisa. Waa ka soo horjeedda sharciga in lagu raaco haweeney aan xaaskaaga ahayn ama xubin qoyskaaga ka mid ah, iyo booliska diintu waxay si gaar ah fiiro gaar ah u siinayaan lamaanayaasha is dhexgalka ah.
Haweenka keli ah. Haweenka aan la socon qoysaskooda. Tani waa kooxda ugu xaddidan. Inta badan tas-hiilaadka loogu talagalay qoysaska waxay aqbali doonaan dumarka kelidood ah, laakiin iyagu waa marna loogu talagalay in loo oggolaado qaybta ragga, oo ay la kulmaan indha sarcaad aan fiicnayn markay yihiin: waa sharciga ka soo horjeedda in lagu raaco meel kasta nin aan ahayn seygaaga ama xubin qoyskaaga ah (marka laga reebo darawal la soo kireystay ama darawal taksi). Ciqaabta ayaa ninka uga daran tan naagta. In kasta oo ninku ku khasban yahay inuu saxeexo dhaar qoraal ah oo aanu ku celin dembiga oo laga yaabo in lagu xukumo ama la xidho, dumarka guud ahaan "waa loo celiyaa" qoysaskooda, iyada oo nin reerka ka mid ahi u saxeexayo magaceeda. Qiimaha dhaqameed ee la saaray "xishoodka" iyo "sharafta" ayaa ka dhigaya booliska diineed inay ka caga jiidaan inay si furan "uga baxaan" haweeney gafaysa waxayna isku dayi doonaan inay dhibaatada ku xaaqaan rooga hoostiisa, ilaa ay ka sii badiyaan kiisaska "xun".
Tusaalooyinka caadiga ah ee kala soocidda waxaa ka mid ah:
Banks Laamo gooni ah oo loogu talagalay ragga iyo dumarka, laakiin markii qaybta haweenka aan laga helin laan, haweenka waxaa loo oggol yahay laanta ragga.
Dukaamada kafeega Badanaa ragga kaliya, in kasta oo inyar ay leeyihiin qaybo qoys.
hotels Haweenka kelidood ah uma baahna ruqsad qoraal ah in loo oggolaado inay wax soo galaan, haddii ay haystaan ​​kaarar aqoonsi oo u gaar ah. Jimicsiyada jimicsiga, barkadaha iyo isboortiga guud ahaan waxaa lagu xadiday ragga oo keliya, laakiin xarumaha dumarka qaarkood ayaa la heli karaa.
Matxafka Saacado furitaan gooni ah oo loogu talagalay qoysaska iyo ragga (“qoysaska” sida caadiga ah waxaa ku jira dumarka kelida ah).
maqaayado Qaybo u gaar qoysaska iyo ragga. Aqlabiyaddu waxay u oggolaan doonaan haweenka kelidood ah qaybta qoyska.
Suuqyada dukaamaysiga U oggolow dhammaan booqdayaasha, laakiin badanaa fiidkii iyo sabtiyada iyo axadaha waxaa loo qoondeeyey qoysaska iyo dumarka kelidood ah.
Dukaamada Badanaa u oggolow dhammaan martida.
Dadka deegaanku guud ahaan waxay xirtaan a wadnaha (khamiis cad oo leh gacmo) oo leh a gutra (xijaabka), laakiin nidaamka labiska ragga ajnabiga ah ee jooga Sacuudi Carabiya waa surwaal dhaadheer iyo shaati gacmo-dheer. Shaati-gacmo-gaabku waa wax aan caadi ahayn, in kasta oo funaanadaha ay ku sii badanayaan dhallinyarada caasiyiinta ah, halka gaagaaban ay yar tahay in lagu arko banaanka goobta jimicsiga ama xeebta.
Ragga leh timo dhaadheer waxay rabaan inay tixgeliyaan goynta kahor intaysan boqortooyada gelin; inkasta oo qufullada garabka-dheer loo qaadan karo macquul, wax kasta oo intaas ka dheer waxaa loo qaadan karaa sababo looga soo horjeedo xarumaha ganacsiga iyo meelaha caamka ah ee muttawa.
Haweenka, ha ahaadeen kuwa waddaniga ah ama shisheeyaha, dhammaantood waxaa laga doonayaa inay xirtaan an cabaayad, khamiis dheer oo dabacsan. In kastoo indho-shareerka xiisaha u leh dumarka aan ahayn Sacuudiga (gaar ahaan Jeddah iyo Dammam), mid waa in ugu yaraan la keenaa si looga fogaado dhibaateynta suurtagalka ah ee booliska diimeed ama loo adeegsado qaab looga weecinayo feejignaanta ragga suurtagalka ah inay sii xumeyso.
Sharciga Sucuudiga ayaa mamnuucaya haweenka inay ku dhex milmay rag aan qaraabo ahayn. Makhaayadaha qoysaska qaarkood way sii dheeraan doonaan oo (ogaal ahaan) uma oggolaan doonaan lammaanaha is qaba inay wada cunteeyaan nin keliya.
Naag waxaa laga yaabaa socdaal kaligeed haddii ay iyadu qoraal ogolaansho ah ka heshay mahram. Waxay sidoo kale kaligood joogi karaan hudheelada, in kasta oo hudheeladu u baahan karaan ogolaansho qoraal ah marka laga baxayo mooyee inay haweeneydu haysato aqoonsi rasmi ah.
In kasta oo waxaas oo dhan ay si sharci ah u khuseeyaan haweenka ajnabiga ah sidoo kale, ficil ahaan dumarka ajnabiga ah qoysaskooda kama horjoogsadaan sida haweenka Sacuudiga ay yihiin, waxayna yeelan karaan dib u dhac weyn haddii ay doortaan inay qaataan. Tusaale ahaan, naag ajnabi ah iyo saaxiibkeed (ama xitaa nin la shaqeeya) ayaa si fudud u sameyn kara sheegasho ahaansho sayga iyo afada, oo sidaas si xor ah isugu milma - in kasta oo, haddii lagu qabto iyagoo sidaas samaynaya, ay mararka qaarkood ku dhici karaan xabsi muddo gaaban ah.
Haweeney kali ah oo booliisku soo dhoweeyay ama muttawa oo codsaday in lala yimaado maahan (iyo, ammaankooda, waa inaysan aheyn) inay keligood raacaan: waxaad xaq u leedahay inaad wacdo kanaga mahram oo ha yimaadeen, waana inaad isticmaashaa. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagaa rabi karaa inaad dhiibto aqoonsigaaga, mana bixi kartid ilaa booliska / muttawa ay kuu ogolaadaan.
Sawir waxay u badan tahay inay tahay habka ugu fudud ee soo booqde uu si ula kac ah dhibaato u geli karo. Samee ma sawirro ka qaad dhisme kasta oo dowladda la xiriira (wasaaradaha, garoomada diyaaradaha, xarumaha milatari iwm) ama dhisme kasta oo suuragal noqon kara inuu noqdo mid, ama waxaad halis ugu jirtaa in lagu geeyo xabsi si basaasnimo ah. Maaddaama caqiidada adag ee Wahaabiyada ay mamnuuc ka tahay sameynta sawirrada noole kasta oo Sucuudiga ay qiimo sare ku leeyihiin asturnaanta, ha sawirin ragga Sucuudiga ah rukhsad la’aan oo samee ma xitaa ku tilmaan kamaradaada jihada guud ee haweenka, muddada. Xitaa daabacadaha dowladda waxay ka fogaadaan sawirrada dadka waxayna badanaa miciinsadaan wajiyada haddii ay mid adeegsadaan! Si kastaba ha noqotee, sawir qaadista goobaha dadweynaha waxaa lagu caddeeyay sharci dikreeto boqortooyo ah 2006 illaa mooyee haddii kale la dhajiyo ama lagu xadgudbo rabitaanka shaqsi ee ah inaan la sawirin.
Muusikada oo lagu dhex ciyaaro dadweynaha sidoo kale waa la mamnuucay (in kastoo tan aysan ku jirin muusigga oo lagu ciyaaro dalxiis lamadegaanka dhexdiisa tusaale ahaan). Si kastaba ha noqotee, ciyaartooyda muusikada shaqsiyadeed iyo dhageysiga muusikada ee khaaska ah waa hagaagsan yihiin, waxaana ku yaal dukaamo badan oo muusig ah dukaamada wax lagu iibiyo ee dalka haddii aadan u maleynaynin calaamadee joogto ah oo ku saabsan qafiska Britney ee daboolka. Ma aha wax aan caadi ahayn in la maqlo dhalinyaro reer Sucuudi ah oo ku qarxinaya muusigga ugu dambeeyay ee hip-hop baabuurtooda, ugu yaraan marka uusan mutada agteeda ka jirin.
Alaabta diinta ee diimaha kale ee aan ahayn Islaamka, oo ay ku jiraan Baybalka, iskutallaabyada iskutallaabta lagu qodbo iyo wixii suugaan diimeed ah, waa mamnuuc, in kasta oo maalmahan waxyaabaha shakhsi ahaan loo isticmaalo guud ahaan la iska indhatiro. Si kastaba ha noqotee, wax kasta oo tilmaamaya diin-sheegasho ayaa la daaweynayaa aad si adag, iyo muttawa inta badan waxaa ku dhaca shirarka kaniisadaha sharci darrada ah iyo wixii la mid ah. Ku dhaqanka bulshada ee diimaha aan Islaamka ahayn waa dambi gudaha Sacuudiga.
Calanka Sacuudi Carabiya wuxuu xambaarsanyahay ku dhawaaqida diinta ee diinta Islaamka, wasakhda ama adeegsiga kale ee aan habooneyn ee calanka waxaa loo arkaa inay tahay aflagaado. Dhaleeceynta bulshada ee Boqorka, qoyska boqortooyada ama dowladda Sacuudi Carabiya looma dulqaadan karo.
Isgaarsiinta Sacuudi Carabiya
Afarta shirkadood ee mobilada ka shaqeeya ee Sucuudiga ah, ayaa xilka haya Al Jawal, Imaaraatiga oo la tartama Moobiil , Kuwaiti Saynab (Shabakada Vodafone) iyo kucusub STC Jawwy waa tartan adag, oo leh daboolid wanaagsan (meelaha dadku ku badan yahay) iyo qiimayaal wanaagsan. Xirmo bilow ah oo leh SIM-sii lacag-bixinta ah iyo waqtiga hadalka ayaa bilaabmaya qiyaastii SR75, waxaadna iska diiwaan gelin kartaa inta badan dukaanno waaweyn oo moobiil ah (keen baasaboorkaaga). Wicitaanada maxalliga ah waxay ka hooseeyaan SR0.5 / daqiiqad, halka wicitaanada dibedda ay ku dhow yihiin ama ka yar yihiin SR2 / min.
Haa, waad soo qaadan kartaa taleefankaaga: in kasta oo ay gunuunac ka imanayaan culimada, taleefannada kamaradaha iyo farriimaha farriimaha badan (MMS) ayaa hadda sharci ah.
Makhaayadaha internetka ayaa ku badan magaalooyinka waaweyn ee Sacuudiga, suuqyo badan oo laga dukaameysto waxaa ku yaal qolka ciyaarta ama labo. Siciradu waa qiyaastii SR5 / saacad.
In kasta oo Internetka Sacuudi Carabiya uu ku xiran yahay shaandheyn, waxay ujeedkeedu ugu horrayn yahay filimada qaawan, diinta Islaamka iyo bogagga siyaasadeed ee gudaha ee Carabiga ah, iyo (marka laga eego aragtida socdaalka) meelna ugama dhowaan sida adag, waxaad dhahdaa, Shiinaha's Google, Skype, Wikipedia, iyo dhammaan bixiyeyaasha shabakadaha waaweyn waa la heli karaa.
Faafreebka internetka ee Sacuudi Carabiya waxaa laga yaabaa inuusan u adkeyn sida dalalka kale ee Bariga Dhexe. Sababtuna waxay tahay baraha bulshada sida Facebook iyo Twitter lagama mamnuuco dalka. In kasta oo Skype sidoo kale la oggol yahay, haddana dawladda Sucuudiga ayaa mamnuucday barnaamijka casriga ee casriga ah ee Viber. Goobaha la mamnuucay dabcan waxaa ka mid ah bogagga internetka ee qaawan, iyo bogagga ay ku jiraan khaniisnimada, khamaarka sharci darrada ah, iyo dhaleeceynta ka dhanka ah diintooda iyo dowladdooda.
Boostada Sacuudiga waxay leedahay shabakad wanaagsan oo xafiisyada boostada ah ee waddanka oo dhan, laakiin xafiisyadu waa xiran yihiin Khamiista iyo Jimcaha. Shaambadaha kaararka boostada meel kasta oo adduunka ah waxay ku kacaysaa SR4. Dhibaatada ugu weyn ayaa runtii ah helitaanka kaararka boostada, sida mutawwa in xilliyada qaar la carqaladeeyo dabaaldegyada ciidaha aan Islaamka ahayn sida Maalinta Jacaylka, Kirismaska ​​ama xitaa maalmaha dhalashada, oo sababa oo dhan kaadhadh noocuu doono ha noqdee oo laga waayo bakhaarada buugaagta lagu iibiyo. Khamaarkaaga ugufiican waa dukaamada hadiyadaha ee hudheelada waaweyn. Fariimaha ka imanaya dalka dibadiisa ayaa caan ku ah kalsoonida. Sheekooyinka ayaa ku badan waxyaabaha imanaya bilo kadib markii la diray ama aan waligood iman. Waxaa jira laamo DHL, FedEx iyo UPS ah oo ka shaqeeya boqortooyada oo dhan, markaa qaanuunka wanaagsan ee suulka ayaa ah in wax muhiim ah loo diro kanaalkaas.
Tilmaamaha Safarka Muslimiinta ee Maka
eHalal Safarka Mart > Safarka Islaamka ee Sacuudiga
Bang Pa-In Hagaha Socdaalka Xalaasha ah